जाडो मौसममा कस्तो खानेकुरा खाने ? | NepalDut
जाडो मौसममा कस्तो खानेकुरा खाने ?
जाडो समयमा शरीरको हड्डी दुख्ने , रुघाखोकी लाग्ने,चिसोले केटाकेटीमा घाटी दुख्ने टन्सिल बढने र त्यसैको असरले बाथ मुटु हुने समस्या देखापर्ने हुदा विशेष खानेकुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । चिसोबाट बच्नका लागि शरीरलाई प्रोटिन तथा विभिन्न खालका भिटामिनहरूको आवश्यक पर्छ। केही त्यस्ता खानेकुरा र फलफूल छन्, जसलाई नियमित खाने गर्नाले चिसोबाट बच्न सकिन्छ।